Budata Thumb Drift APK maka Android
Budata Thumb Drift
Free Budata maka Android (63.00 MB)
Budata Thumb Drift,
Enwere ike ịkọwa Adị mkpịsị aka dị ka egwuregwu ịgba ọsọ mkpanaka nke ị nwere ike igwu ngwa ngwa ma nwee ọtụtụ ntụrụndụ.
Egwuregwu na-akpali akpali ma na-akpali akpali na-echere anyị na Thumb Drift, egwuregwu ị nwere ike ibudata ma kpọọ nefu na ekwentị gị na mbadamba na iji sistemụ arụmọrụ gam akporo. Ihe mgbaru ọsọ anyị kachasị na egwuregwu anyị bụ ime ka nkà anyị dị nakụkụ na-ekwu okwu, notu aka, na mezue agbụrụ ahụ site na ịga nihu nụzọ anyị nụzọ zuru oke naka nke ọzọ. Ọ bụ ezie na ọrụ a nwere ike iyi ihe dị mfe, agbụrụ siri ike na-echere anyị.
Isi mkpịsị aka nkwọ bụ egwuregwu ịgba ọsọ ị nwere ike iji naanị otu mkpịsị aka rụọ. Mgbe ị na-egwu egwuregwu ahụ, ị ​​na-adọrọ mkpịsị aka gị naka nri ma ọ bụ aka ekpe iji mee ka ụgbọ gị banye na ụzọ ịchọrọ. Nke a bụ otu ị ga - esi merie ihe gbagọrọ agbagọ na ebe ịgba ọsọ na - enweta ihe site na ịnakọta ọla edo nụzọ gị. I nwekwara ike unlock kpọghee ekwt dị iche iche ugbo ala na egwuregwu.
Mgbe ị gbachasịrị gbagọrọ agbagọ nakụkụ, ịkwesịrị ịnakọta ụgbọ gị na oge kwesịrị ekwesị. Mgbe ị nwere ihe mberede na ụgbọ gị, ị nwere ike ịhụ na ụgbọ gị gbajiri. Ihe mgbochi dị iche na agbụrụ esemokwu dị elu na-echere ndị egwuregwu ahụ egwu ndị dị na egwuregwu ahụ.
mara mma ndịna
Thumb Drift Ụdịdị
Nha faịlụ: 63.00 MB
Mmepụta: SMG Studio